I--2-MG Cys-C-Umsebenzi we-renalⅡ I-Kit ekhawulezayo yokuhlaziya i-Kit-Indawo yoVavanyo loKhathalelo-lweSinocare
β2-MG Cys-C-Umsebenzi weRenalⅡ Kit ekhawulezayo yokuhlaziya
[imeyile ikhuselwe] I-β2-Microglobulin / iCystatin C Reagent Kit yenzelwe ukumisela ngokobungakanani β2-microglobulin kunye necystatin C kwiserum yabantu. Ngokwezonyango, ubukhulu becala isetyenziselwa ukuxilonga izifo zezintso.
ICys C luphawu olufanelekileyo lokubonisa izifo zezintso. ICys C ibakho kakhulu kulwelo lomzimba olunjengegazi, ulwelo lwe-cerebrospinal, amathe, amadlozi, njlnjl. ICys C ingadlula kwi-membrane ye-glomerular filtration ngokukhululekileyo. Iphinde yaphinde yaphinde yenziwa nge-tubule edibeneyo kwaye ayisathathi nxaxheba ekujikelezeni kwegazi. Njengoko iityhubhu zezintso zingayivelisi iCys C, utshintsho kwiCys C yoxinaniso egazini lubonisa izinga lokuhluza le-glomerular, elibonisa imeko yomsebenzi wezintso, kubandakanya ukonzakala kwezintso.
βI-2-MG: uxinzelelo lwe-β2-MG egazini lezigulana ezine-lymphoma enobungozi, i-leukemia engapheliyo ye-lymphocytic, i-non-Hodgkin's lymphoma okanye i-myeloma eninzi njl. Uxinzelelo lwe-β2-MG egazini lezigulana ezine-uremia, isifo se-nephritic kunye nokusilela okunamandla kwe-renal nazo ziphezulu kakhulu.
Inkqubo yokuphendula kwisigaba samanzi, usebenzisa i-latex immunoturbidimetry methodology ikhokelela kwiziphumo ezichanekileyo
Inkqubo ye-iPOCT ihambelana kakhulu novavanyo lomntu kwaye iyimfuneko ngokwenene
Ulondolozo lwemihla ngemihla aludingeki
β2-MG / iCys C
Ubungqina C: 0.4 ~ 8 mg / L